Muwaadin Somali-Canadian ah oo Dalka Suuriya Ku Shahiiday iyo Turkiga oo Maxaabiis loosii daayay.
Saturday September 20, 2014 - 19:08:16 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Suuriya ayaa sheegaya in dagaallo culus oo khamiistii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanno katirsan gobolka Xalab uu ku shahiiday muwaadin soomaali ah.
Somali Canadian ku shahiiday wadanka Suuriya Khamiistii lasoo dhaafay
Ragga firfircoon ee soo tebiya wararka jihaadka Suuriya iyo Ciraaq ayaa xaqiijiyay in wiil dhalinyaro Somali-Canadian ah lagu dilay dagaallo ka dhacay magaalada Ceynul carab ee dhacda xadbeenaadyada ay wadaagaan Turkiga iyo Suuriya.
Lama sheegin magaca qofka dhalinyarada ah ee shahiiday balse waxaa lasoo bandhigay sawirkiisa isagoona sanad ka hor ka tegay wadanka Canada oo kamid ah wadamada reer galbeedka.
Tobaneeyo Soomaali ah oo ka tegay wadamada qaaradda Yurub iyo Waqooyiga qaaradda America ayaa sanadadii lasoo dhaafay usocdaalayay dhanka dhulka shaam iyo Ciraaq iyagoona ka barbar dagaalamaya mujaahidiinta dowladda islaamiga ah.
Dhinaca kale dowladda Turkiga ayaa ku dhawaaqday in 49 qof oo Turkish ah ay xuriyadooda dib uheleen kadib muddo bilo ah oo ay ku qafaalnaayeen gudaha wadanka Ciraaq.
R/wasaaraha Turkiga Axmed Daa’uud Ooglo ayaa xaqiijiyay in saraakiil iyo shaqaale rayid ah oo gacanta ugu jiray dowladda islaamiga ah si nabad gelyo ah lagusii daayay ayna soo gaareen magaalada Ankara.
Madaxweynaha Turkiga ayaa dhankiisa sheegay in ciidanka sirdoonka ay gacan ka geysteen sii daynta muwaadiniinta oo isugu jira saraakiil ciidan.dublumaasiyiin iyo injineerro.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dowladda Turkiga ay bixisay lacag dhan 100 Milyan oo dollar islamarkaana xoogaga ISIS loo balanqaaday in Turkigu uusan ka qeyb qaadan doonin duullaanka ka dhanka ah Mujaahidiinta.
Mahaatiir Muxamed oo iska casilay Xilka R/wasaaranimo ee dalka Malaysiya.
Video: Xoogaga Mucaaradka Suuriya oo dhulka soo dhigay Diyaarad uu lahaa nidaamka Bishaar Al Asad.